News Archives - Page 56 of 61 -
ရူံးပွဲအပြီး အီတလီပရိတ်သတ်တွေကိုလိုက်လံရိုက်နှက်နေတဲ့ အင်္ဂလန်ပရိတ်သတ်များရဲ့ အောက်တန်းကျတဲ့ လုပ်ရပ် (ရုပ်/သံ)
Jul 12, 2021 Achit Post
စိတျဓါတျတှေ အောကျတနျးကတြဲ့လုပျရကျ ယူရိုပွိုငျပှဲ အပွီး လိုကျလံတိုကျခိုကျခွငျး ခံရတဲ့ အီတလီပရိသတျမြား(ရုပျ/သံ) ယူရိုပွိုငျပှဲ ကွီးကတော့ ပွီးဆုံးသှားပါပွီနျော.. ဗိုလျလုပှဲမှာ တော့ နံမညျကွီး အင်ျဂလနျနှငျ့ အီတလီတို့ ထိပျတိုကျတှကွေ့တာပါ…. မိနဈ ၉၀ အခြိနျပွညျ့တဲ့ အထိ…
DDAY စပြီဆိုတာနဲ့ ပြည်သူအားလုံးဟာ PDF ဖြစ်သွားနိုင်တဲ့ အခြေအနေနှင့် လာမစမ်းနဲ့ပွဲကြမ်းတွေလာမယ်
MAH ကတော့ ရုရှကပွနျလာပွီးထဲက လူတှရှေေ့ ထှကျလာတာ မတှရေ့တော့ပါဘူး စကစရဲ့လုပျဆောငျမူ့တှလေဲ နှေးကှေးလာ သလို နိုငျငံတကာမှာ။ လဲသူ့ကိုဘယျသူမှလကျမခံတဲ့အတှကျ ဘယျလိုမှရှဆေ့ကျ မရတာကိုတှေ့ ရပါတယျ ဝမျယိကတော့ စကစကိုနိုငျငံတကာကအခုလို ပိတျဆို့ထားတာကို ။ လကျမခံဘူးလို့ ပွောငျပွောငျ…
အောက်ဆီဂျင်ရဖို့ ၁၁ကြိမ် တိတိအကူအညီတောင်းပေမယ့် မရခဲ့ပဲ အသက်ပေးလိုက်ရတဲ့ နောက်ဆုံးနှစ်ကျောင်းသားလေး အောက်ဆီဂျင်ရရှိနိုင်ဖို့အတွက် အကြိမ်ကြိမ် တောင်းခံခဲ့ပေမဲ့ မရရှိခဲ့ဘဲ သေဆုံးခဲ့ရတဲ့ WYTU ဗိသုကာတန်း Final Year ကျောင်းသားလေး လက်ရှိမှာတော့ ကိုဗစ် ပိုးတွေ့တဲ့ လူတိုင်းကြုံနေရတဲ့…
အောက်ဆီဂျင်စက်ရုံတည်ထောင်ပြီး မြို့နယ်အတွင်းပေးဝေဖို့အတွက် ကျပ်သိန်း(၁၀၀၀)တိတိကို မတည်လှူဒါန်းခဲ့တဲ့ မိုးကုတ်မြို့ကမိသားစုတစ်စု
ကိုဗစ်တတိယလှိုင်းတွေပြန်ဖြစ်နေပြီး ကိုဗစ်ကူးစက်ခံရတဲ့ လူနာတွေ၊အသက်ရှူကြပ်လူနာတွေ၊ ကိုဗစ်ကူးစက်မှုတွေကြောင့် သေဆုံးသွားတဲ့ ပြည်သူတွေလည်းအများအပြားရှိနေပါတယ်။ အောက်ဆီဂျင်မရရှိဘဲ အသက်သေဆုံးသွားတဲ့ ပြည်သူတွေလည်းရှိနေပြီး အောက်ဆီဂျင်ဖြည့်ပေးတဲ့ဆိုင်တွေမှာ ညခင်းတွေအထိ တန်းစီစောင့်ဆိုင်းနေကြပါတယ်။ အောက်ဆီဂျင်ဖြည့်ပေးတဲ့ စက်ရုံအချို့ဟာ ပုဂ္ဂလိကပြည်သူများသို့ အောက်စီဂျင်ဖြည့်သွင်းမှု ရပ်ဆိုင်းရန်ဆိုတဲ့ ညွှန်ကြားချက်ကြောင့် ရပ်ဆိုင်းလိုက်ကြပြီး ပြည်သူအများအပြားဒုက္ခရောက်နေကြပါတယ်။…
တရုတ်နိုင်ငံ နေရာတော်တော်များမှာ ကပ်ဆိုက်နေတဲ့ (ရုပ်သံ)
တရုတ်နိုင်ငံ တော်တော်များမှာ ကပ်ဆိုက်နေတဲ့ (ရုပ်သံ) နေ့စဉ်နဲ့အမျှ ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ တရုတ်နိူင်ငံ၏ လက်ရှိအခြေအနေ ပျက်ဆီးချိန်တန်ရင် ဘယ်အရာမှ တားဆီးလို့မရ သလို , ဖုန်းကွယ်လို့လည်းမရပါဘူး……… ကံကြမ္မာက မျက်နှာသာမပေးတော့ရင် ဝဋ်ကြွေးရှိလို့ ခံရတယ်လို့ သတ်မှတ်ပြီး တရားသဘောနဲ့…
“ဖန်ဆင်းရှင် မဟုတ်ပေမယ့် မြန်မာ့အကြပ်အတည်းကို ဖြေရှင်းပေးနိုင်တဲ့တစ်ဦးတည်းသော ဩဇာပါဝါရှိသူ” Oxygen တွေခက်ခဲနေပြီလား?အမေစုကိုသာလွှတ်‌ပေးလိုက် အဆင်ပြေသွားလိမ့်မယ်။ ဘဏ်စနစ်တွေ အဆင်မပြေတော့ဘူးလား?အမေစုကိုတီဗွီကနေမိန့်ခွန်းပြောခိုင်းလိုက်အဆင်ပြေသွားလိမ့်မယ်။ ကိုဗစ်‌ကြမ်းလာပြီ၊ ဆရာဝန်တွေမရှိဘူးလား?အမေစုကိုလွှတ်ပေးပြီး ပြည်သူကိုအာဏာပြန်အပ်လိုက်ဆရာဝန်တွေတန်းစီထွက်လာလိမ့်မယ်။ Volunteer တွေမရှိတော့ဘူးလား?အ‌မေစုမျက်နှာကို ဖန်သားပြင်မှာမြင်ရရင်အားကျိုးမာန်တက်ပြန်လာလိမ့်မယ်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေ၊ အလှူရှင်တွေဘယ်ပျောက်နေလဲ? အမေစုကိုမတရားဖမ်းပြီး ဒီမိုကရေစီကိုအကျဉ်းချထားလို့…
မြန်မာပြည်ထဲက ကလေးတွေကို လိင်ပိုင်းကျူးလွန်ခဲ့သူ ဗြိတိသျှလူမျိုး
Jul 10, 2021 Achit Post
မြန်မာပြည်ထဲက ကလေးတွေကို လိင်ပိုင်းကျူးလွန်ခဲ့သူ ဗြိတိသျှလူမျိုး မြန်မာနိုင်ငံထဲ ကလေးသူငယ် ယောက်ျားလေးတွေကို လိင်ပိုင်း မတော်မတရား ပြုခဲ့တဲ့ အသက် ၆၆ နှစ် အရွယ် အမျိုးသားတစ်ဦးကို အင်္ဂလန် ရာဇဝတ် တရားရုံးတော်တစ်ခုက ထောင်ဒဏ် ၆…
ကာကွယ်ဆေးကြောင့် ၁၃၁ဦး သေဆုံးခဲ့တဲ့ တရုတ်၊ ရုရှား ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေး ၇သန်းကို ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လှိုင်ဝယ်ယူ
ကာကွယ်ဆေးကြောင့် ၁၃၁ဦး သေဆုံးခဲ့တဲ့ တရုတ်၊ ရုရှား ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေး ၇သန်းကို ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လှိုင်ဝယ်ယူ ဥရောပနှင့် အနောက်နိုင်ငံကြီးများက အသိအမှတ်မပြုသည့် တရုတ်နှင့်ရုရှား ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေး ၇ သန်း မင်းအောင်လှိုင် ဝယ်ယူ၊ တရုတ်ဆေးထိုးထားသည့် အင်ဒိုနီးရှားကျန်းမာရေး ဝန်ထမ်း…
ဆရာဝန်တွေကို ကန်ထရိုက်စနစ်နဲ့ ခန့်ပြီး ကိုဗစ်ကို တိုက်ထုတ်မယ်ဆိုတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လှိုင်(ရုပ်/သံ)
ဆရာဝန်တွေကို ကန်ထရိုက်စနစ်နဲ့ ခန့်ပြီး ကိုဗစ်ကို တိုက်ထုတ်မယ်ဆိုတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လှိုင်(ရုပ်/သံ) ကိုဗစ်ကာကွယ်ရေးအတွက် ဆရာဝန်တွေကို ကန်ထရိုက်စနစ်နဲ့ ခန့်ထားပေးဖို့ စီစဉ်ထားတယ်လို့ စစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌပြော(ရုပ်သံ) ရုပ်သံကိုအောက်ဆုံးမှာ ဖော်ပြပေးထားပါတယ်… ဇူလိုင် ၉ ရက်နေ့သတင်းအရ “လက်ရှိနိုင်ငံရေးအခြေအနေအရ တချို့နေရာတွေမှာ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းအခက်အခဲရှိတာတွေ့ရပါတယ်…။…
ဆိုင်ကယ်ရော် လူရော် ပျောက်သွားပြီး အလောင်းသာ ပြန်ရှာတွေ့လို့ရင်ကွဲနေရတဲ့ မိသားစု
လတျတလော နိုငျငံရေးမတညျငွိမျမှုတှကွေောငျ့ ပွညျသူတှအေားလုံး စိတျသောကမြားစှာ ကွုံတှေ့ ခံစားနကွေရတာ ဖွဈပါတယျ။ အကွောငျးအမြိုးမြိုးကွောငျ့ သဆေုံးနကွေတဲ့ သတငျးတှကေလညျး နစေ့ဉျနဲ့အမြှ လူမှုကှနျယကျမြားတှငျ မွငျတှနေ့ရေတာ ဖွဈပါတယျ။ ဒီနမေ့နကျတှငျလညျး မှနျပွညျနယျ ကြိုကျမရောမွို့က စိတျမကောငျးစရာသတငျးတဈခုကို ပွညျသူတဈဦးမြှ ရေးသားဝမြှေထားတာ…